सिद्धान्त विनाको राजनीति विध्वंशकारी हुन्छ::elumbinikhabar.com
सिद्धान्त विनाको राजनीति विध्वंशकारी हुन्छ
विद्या यादव सह–प्रवक्ता, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, प्रदेश नं ५
रोहिणी गाउँपालिका वडा नं ३ लक्ष्मीपुर निवासी संघीय समाजवादी फोरम नेपाल प्रदेश न.ं ५ को सह प्रवक्ता विद्या यादव २०४६ भदौ १० गते बुवा प्रशुराम यादव र आमा गुजराती यादवको कोखबाट जन्मिएका हुन् । साबिक धकधई गा.वि.स. हाल रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा जन्मिएका यादव लामो समय देखि रोहिणी गाउँपालिकामा रही विकास र सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छन् ।
समाजको विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण भुमिका हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने यादवले नेपाली जनताको पक्षमा सधै संघर्ष गर्दै आएका छन् । हिजोका राजनीतिक आन्दोलन होस् या मधेस आन्दोलन होस् सबै आन्दोलनमा जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै अगाडि बढेका यादव रुपन्देहीमा आशा लाग्दा युवा नेताको रुपमा परिचित रहेका छन् । जनताले मन पराउने नेताको छबि बनाएका यादवले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत राम्रो प्रभाव कायम राखेका छन् । यीनै यादवसँग राजनीतिक परिस्थिति र आन्दोलनको सेरोफेरोमा रहेर लुम्बिीखबरका प्रतिनिधि (पत्रकार) पशुपति यादवले गरेको कुराकानीको केही अंश ।
यहाँको राजनीतिक यात्राको बारेमा बताइदिनुहोस् ?
–म २०६२ साल देखि नै राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । मधेशी जनजाती र उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने एक मात्र पार्टी संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा आबद्ध भई राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील छु । हाल यस पार्टीको प्रदेश नं. ५ सह प्रवक्ता रुपन्देही जिल्लाको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु । नेपाली जनताको मुक्तिको निम्ति म राजनीतिक यात्रामा दौडिरहेको छु । जनताका समस्याहरु समाधान गर्नका लागि समेत मेरो संघर्ष जारी रहेको छ ।
यहाँले नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
– वर्तमान समयमा देशको राजनितीक परिस्थिति समृद्धि अर्थात आर्थिक ,भौतिक विकास तिर अगाडि बढेको देखिएको छ । किनभने दलका राजनेताहरुले राजनीतिसँगै जोडेर अबको राजनीतिक प्रदूषण प्रचार प्रसार हैनकी समृद्धिमा सबैको ध्यान केन्द्रीत छ । हामीले समग्र देश तथा विशेष गरी मधेसी, दलित, जनजाती र उत्पीडनमा परेका जनताको पक्षमा आफ्ना एजेण्डा जोडदारका साथ अगाडि बढाएका छाँै ।
मधेशी जनताको पक्षमा यहाँको राजनीतिक आन्दोलनले कहिले सफलता पाउला ?
–मधेश र मधेशी जनताको लागि आन्दोलन गरियो त्यसको उपलब्धि संघियता स्थानीय सरकारको गठन समेतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । केही मात्र बाँकी रहेका छन् जस्तै संविधान संसोधन समुदाय अनुसारको सीमांकन हेरफेर नागरिकता विहिन मधेश पहाड हिमालमा रहेका मानिसहरुले भनेर समथर भुभागमा चक्ला बन्दी भने उल्लेखित बुँदाहरु कार्यावन्यन भएमा मात्र आन्दोलनले सफलता पाउला । हिजो राजनीतिक अवस्थाबाट अहिले संघ देशी प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था समेत हाम्रो आन्दोलनले गर्दा प्राप्त भएको हो । हाम्रो पार्टी नै यस्तो पार्टी हो जसले मधेसी, दलित, जनजाती र उत्पीडनमा परेका जनताको पक्षमा आन्दोलनको सुरुवात गरी अहिलेसम्म जारी राखेको छ ।
जनमानसमा लोकप्रिय नेताको रुपमा यहा परिचित हुँदाहँुदै पनि निर्वाचनमा पराजय भोग्नुको कारण के हो ?
–पराजय भोक्नुको मुख्य कारण मुख्य कारण हो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्ध र केही क्षेत्र निर्धारणले पनि पराजयको कारण बनेको हो । मेरो क्षेत्रका जनताले मलाई विश्वास गरेर गठबनधन हँुदाहँुदै पनि अधिकतम मत दिएका हुन् धन्यवाद दिन चाहान्छु र आउने आगामी दिनको लागि तयारीमा छु । निर्वाचनमा विजय हुने र संसदमा जाने मात्र ठूलो कुरा नभएर जनताको समस्या तथा पीर मर्कामा सधै साथ दिने म जस्ता राजनीतिकर्मीका लागि जनताको साथ सधैँ रहने समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । जसले मधेसलाई उज्यालो तर्फ लग्ने अभियान सफल हुन लागेको छ ।
संघिय समाजबादी फोरम नेपालले तराई पहाड हिमाललाई मिलाउने मुख्य पार्टीको रुपमा अगाडि बढेको छ, यहाँले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पार्टीको सिद्धान्तलाई कतिको लागू गर्नुभएको छ ?
–सिद्धान्त बिनाको राजनीति विध्वंशकारी हुन्छ, त्यसकारण आफ्नो पार्टीको त्यस कारणमा आफ्नो पार्टीको दस्तावेजको विधाननुसार आफ्नो कार्य क्षेत्रमा कुनै किसिमको विभेद प्रतिसोध पुर्वग्रही नराखीकन सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेको छु । सहिष्णुता, सद्भाव कायम गरि संघिय समाजवादी फोरम नेपालले कहिले पनि सौतेला व्यवहार गर्दैन । हाम्रो देशमा सिद्धान्त विनाको राजनीति गर्ने पार्टी विलन अवस्थामा गुजारी रहेका छन् । म एउटा नेपाली हुँ नेपाल प्रति बफादार इमान्दार भएर आफ्नो मधेशको धर्म संस्कृति भाषालाई हामी जस्ता नागरिकको कर्तव्य हो अधिकार विहीन कसैले बनाउन कोसिस गरेमा उनको लागि छुट छैन ।
अन्त्यमा लुम्बिनीखबर पत्रिका मार्फत जनताहरुलाई के भन्न चाहानु हुन्छ ?
–लुम्बिनीखबर पत्रिकालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरा कुराहरु राख्ने अवसर दिनुभयो । यसपत्रिकाको सफलताको कामना गर्दछु । हक अधिकार सुनियत भनाइको लागि विभेदको अन्त्य जतिसुकै बेला जनताको काम सक्रिय भएर लागेको कुरा अवमत नै छ । युवाले देशको उर्जाशील शक्ति भएको संघिय समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनको लागि अनुरोध गर्दछु ।